स्वास्थ्यमन्त्रीमा फेरी गगन , सपथ भोलि बिहान ! – Media News Khabar
साउन १७ काठमाडौ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथ युवा नेता गगनकुमार थापा पनि मन्त्री बन्ने होडमा रहेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट नेता थापालाई मन्त्री बनाउने लगभग सहमति भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेता थापालाई संस्थापना इतर रामचन्द्र पौडेलको पक्षबाट सरकारमा सहभागी गराइने भएको हो ।
नेता थापाले सरकामा सहभागी हुने चाहना देखाएका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले मानेमा उनी मन्त्री हुने निश्चित रहेको स्रोतको भनाइ छ । संस्थापनइतर पौडेल पक्षबाट उनलाई मन्त्री बनाइने सम्भावना बढी छ । यसअघि माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए ।
त्यस क्रममा केही लाेकप्रिय काम पनि गरेर चर्चा कमाएका थिए । त्यस्तैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट बिस्वासको मत प्राप्त गरेपछि नेपाली काँग्रेसमा सरकारमा जान अरू धेरैले इच्छा देखाइरहेका छन् । जसमा काँग्रेसले प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, प्रमोद यादव, राजन केसी र तुजुलाल चौधरीलगायतबाटै मन्त्री छान्ने स्रोतको भनाइ छ ।
यसैगरी गठबन्धनका अन्य घटक माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकाे माधवकुमार नेपाल समूहबाट पनि मन्त्रीका आकांक्षीहरू देखिएका छन् । सबैलाइ मिलाएर लैजान काँग्रेसको कोटा थोरै हुनेछ, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी र भागबन्डा गर्न भने सकस पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै आफ्नो निकटमा नेताहरु बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् ।
Previous बुद्ध एयरको पोखरा-नेपालगञ्ज उडान सुरू, कति हो भाडा?
Next विदेश जानेलाई सातै प्रदेशबाट ‘क्यूआर कोड’ सहितको निशुल्क खोप प्रमाण पत्र